အသက်အရွယ်အလိုက် ကလေးများအတွက် အကောင်းဆုံး 44 ဘုတ်ဂိမ်းများ | အပန်းဖြေပေးပါ။
ဣဇာက်သည် | 17/12/2021 17:48 | အဆင့်မြှင့်တင် 21/12/2021 09:01 | ယေဘုယျ
ရွေးချယ်တဲ့အခါ ကလေးများအတွက် ရယ်စရာအကောင်းဆုံး ဘုတ်ဂိမ်းများအများအပြားအချက်များထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ ထိုဂိမ်းကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် သင့်လျော်သောခေတ်။ နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ သူတစ်ယောက်တည်း ဒါမှမဟုတ် တခြားကလေးတွေနဲ့ ကစားမလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့မိဘတွေနဲ့ လူကြီးတွေနဲ့ ကစားမလား၊ လူတိုင်းအတွက် ဖန်တီးထားသော ဘုတ်ဂိမ်းများ. ဂိမ်းက ပညာပေးဖြစ်သလို ဖျော်ဖြေရေးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းပါတယ်။
ဤလမ်းညွှန်တွင်သင်လိုအပ်သောပစ္စည်းအားလုံးရလိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပါ။ ကလေးများအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းများအပြင် ပညာရေးဆိုင်ရာ ဘုတ်ဂိမ်းများအတွက် အထူးအခန်းပါရှိပါသည်။ ကွန်ဆိုးလ်များနှင့် ဗီဒီယိုဂိမ်းများအတွက် ပိုမိုကျန်းမာပြီး လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခု။ ၎င်းတို့သည် ကောင်းမွန်သော မော်တာကျွမ်းကျင်မှု၊ စူးစမ်းလေ့လာမှု၊ spatial ရူပါရုံ၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းစသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို အသေးအမွှားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများကပင် အကြံပြုထားပါသည်။ လက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုဆိုတာ သံသယကင်းကင်းနဲ့...
1 ကလေးများအတွက် အရောင်းရဆုံး ဘုတ်ဂိမ်းများ
1.1 Trajins ဂိမ်းများ - ဗိုင်းရပ်စ်
2 အသက်အရွယ်အလိုက် ကလေးများအတွက် အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများ
2.1 ၃.၅ မှ ၆ နှစ်ကြားကလေးများအတွက်
2.1.1 Goula ဝက်ငယ် ၃ ကောင်
2.1.2 Disset ပုံတွေနဲ့ လေ့လာတယ်။
2.1.3 BEAN Adela ပျား
2.1.4 BEAN ပထမသစ်သီး
2.1.5 Falomir Spike ပင်လယ်ဓားပြ
2.2 ၃.၅ မှ ၆ နှစ်ကြားကလေးများအတွက်
2.2.1 မနိုးပါနဲ့ ဖေဖေ။
2.2.2 Hasbro ခေါင်းမာသည်။
2.2.5 Goliath မေးရိုး
2.2.8 Hasbro Crocodile သွားကြားထိုးတံ
2.2.10 Falomir ငါကဘာလဲ။
2.3 အသက်6နှစ်မှ 12 နှစ်ကြား ကလေးများအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းများ
2.3.1 Hasbro မိုနိုပိုလီ Fortnite
2.3.3 အသေးအဖွဲလိုက်ရှာ Dragon Ball
2.3.8 Hasbro လည်ပတ်မှု
2.3.9 Hasbro ဘယ်သူလဲ ?
2.4.5 Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်း
2.5 ကလေးများနှင့် လူကြီးများအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းများ
2.5.1 500 အပိုင်းအစပဟေ.ိ
2.5.2 နေအဖွဲ့အစည်း၏ 3D ပဟေဋ္ဌိ
2.5.4 Mattel Scrabble မူရင်း
2.5.6 အဲဒါကို ရိုက်ပါ။
2.5.7 ပထမဆုံး ခရီး
3 အရွယ်မရောက်သေးသူများအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းဝယ်ယူခြင်းလမ်းညွှန်
3.1 အနည်းဆုံးအသက်ကို အကြံပြုထားသည်။
ကလေးများအတွက် အရောင်းရဆုံး ဘုတ်ဂိမ်းများ
အရောင်းရဆုံးများထဲမှ သို့မဟုတ် ကလေးများအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းများ အရောင်းရဆုံးနှင့် အောင်မြင်သည်။သိသာထင်ရှားသော အကြောင်းပြချက်များကြောင့် ထိုအဆင့်တွင် ရှိနေပါသည်။ ၎င်းတို့သည် လူကြိုက်အများဆုံး၊ လူသိအများဆုံးများဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့အား အထူးအသားပေးဖော်ပြသင့်သည်-
Trajins ဂိမ်းများ - ဗိုင်းရပ်စ်
Tranjis ဂိမ်းများ - ဗိုင်းရပ်စ်။ -...
၎င်းသည် အရောင်းရဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သက်သာသည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အသက်2နှစ်မှ ကစားသမား 8 ဦးအတွက် ဂိမ်းဖြစ်ပြီး မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် သင့်လျော်သည်။ ၎င်းသည် စွဲလမ်းပြီး အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်၊ သယ်ယူရလွယ်ကူပြီး ထွက်လာသည့်ဗိုင်းရပ်စ်ကို သင်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကပ်ရောဂါကိုရှောင်ရှားရန်ယှဉ်ပြိုင်ပြီးကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောရောဂါများပျံ့နှံ့မှုကိုကာကွယ်ရန်ကျန်းမာသောခန္ဓာကိုယ်ကိုခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုတိုက်ဖျက်ရန်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။
၎င်းသည် လူငယ်နှင့် လူကြီးများအတွက် တိကျသေချာသော ကတ်ပြားဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အစမှနေ၍ ကစားနိုင်စေရန် လွယ်ကူသော သင်ယူမှုမျဉ်းဖြင့် အလှည့်အပြောင်းဖြင့် ကစားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ရေတွက်ခြင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေများကို စစ်ဆေးရန် ဂဏန်း 100 လုံးအထိ ဂဏန်း2လုံးအထိပါရှိသည့် ပညာပေးအပိုင်းလည်း ပါရှိသည်။
ဇိုင်ဂိုမာတီ - Dobble -...
အသက်6နှစ်မှ စ၍ သင့်တွင် အရောင်းရဆုံး ဂိမ်းတစ်ခုလည်း ရှိသေးသည်။ အထူးသဖြင့် ပါတီပွဲများအတွက် လူတိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံး ဘုတ်ဂိမ်း။ တူညီသော သင်္ကေတများကို ရှာဖွေရာတွင် အရှိန်အဟုန်၊ စူးစမ်းမှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများကို သရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင်နောက်ထပ်အသေးစားဂိမ်း ၅ ခုပါဝင်သည်။
Libellud Dixit မူရင်း-...
အသက် 8 နှစ်မှ စတင်ကစားနိုင်ပြီး မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် ကစားနိုင်ပါတယ်။ အချပ်ရေ 1.5 သန်းကျော် ရောင်းချရပြီး နိုင်ငံတကာ ဆုပေါင်းများစွာသည် ဤဂိမ်း၏ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကတ်များဖြစ်သည်။ သူ၏ကျော်ကြားမှုနှင့်ထိုက်တန်သည်။ သင့်အသင်းဖော်ကို ခန့်မှန်းရန် လှပသောပုံဥပမာများပါရှိသော ကတ် ၈၄ ကတ်ပါရှိသည်၊ သို့သော် ကျန်ပြိုင်ဘက်များမပါဝင်ပါ။
အသက်6နှစ်မှစတင်၍ lynx ဖြစ်လာရန်၊ ဆိုလိုသည်မှာ reflexes နှင့် visual acuity တိုးတက်စေရန်အတွက် ဤဘုတ်ဂိမ်းရှိသည်။ ၎င်းတွင် သင့်ရုပ်ပုံများကို ဘုတ်ပေါ်တွင် ရှာဖွေရန်နှင့် ဖြစ်နိုင်သည့် အများဆုံး အကွက်အရေအတွက်ကို ရယူရန် လိုအပ်သည့် ကစားပုံစံများစွာ ပါဝင်သည်။
အသက်အရွယ်အလိုက် ကလေးများအတွက် အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများ
မင်းကိုကူညီဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။တည်ရှိနေသော ကလေးများအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းများ များပြားလှသည်။ ၎င်းတို့သည် အသက်အရွယ်မရွေး၊ အရသာ၊ အပြင်အဆင်၊ ကာတွန်းစီးရီး၊ မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်၊ စသဖြင့် ဤတွင် သင့်တွင် အသက် သို့မဟုတ် အပြင်အဆင်အလိုက် အမျိုးအစားများစွာ ခွဲခြားထားပါသည်-
၃.၅ မှ ၆ နှစ်ကြားကလေးများအတွက်
မည်သည့်ဘုတ်ဂိမ်းကိုမဆို ဤအသေးအမွှားများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့ဘေးကင်းကြောင်း သေချာစေရန် အထူးသတိထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် ဘေးကင်းရမည်၊ ၎င်းတို့တွင် မျိုချနိုင်သော သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းများ မရှိသင့်သလို ချွန်ထက်သော အစိတ်အပိုင်းများ မရှိသင့်ဘဲ၊ အကြောင်းအရာနှင့် အဆင့်များသည် ဤကလေးများ၏ အမြင့်တွင် ရှိသင့်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းတို့သည် အမြင်အာရုံကောင်းမွန်ခြင်း၊ ရိုးရှင်းသော၊ မော်တာကျွမ်းကျင်မှု၊ အမြင်စွမ်းရည်စသည့် စွမ်းရည်များ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် အာရုံစိုက်ခြင်းစသည့် အချို့သောလက္ခဏာရပ်များနှင့်လည်း ကိုက်ညီရပါမည်။ တချို့က2နှစ်မှ3နှစ်အထိကလေးများအတွက် board games များ၏ တရားဝင်အကြံပြုချက်များ သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
Goula ဝက်ငယ် ၃ ကောင်
Goula- ဂိမ်း The3...
The3Little Pigs ၏ ရေပန်းစားသော ပုံပြင်သည် ကလေးများအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်။ သမဝါယမ သို့မဟုတ် ယှဉ်ပြိုင်မှုမုဒ်တွင် ကစားရန်ဖြစ်နိုင်ခြေဖြင့်။ ၎င်းကို ကစားသမား 1 ဦးမှ4ဦးအထိ ကစားနိုင်ပြီး မတူညီသောတန်ဖိုးများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ ကြွေပြားအစီအရီပါသော ဘုတ်ပြားတစ်ခု၊ အိမ်ငယ်တစ်ခုရှိပြီး၊ ဝံပုလွေမရောက်မီ မည်သည့်ဝက်၏အိမ်သို့မဆို ကြွေပြားများကို ယူဆောင်သွားရမည်ဖြစ်သည်။
Disset ပုံတွေနဲ့ လေ့လာတယ်။
Diset - Lectron ငါလေ့လာတယ်..။
အမေးအဖြေများ ပေါင်းသင်းရန် ကြိုးစားသည့် အသက်3နှစ်မှ ကလေးများအတွက် နောက်ထပ် ပညာပေးဂိမ်း။ အမြင်စွမ်းရည်၊ ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုး၊ အရောင်အသွေး ကွဲပြားခြင်းစသည့် စွမ်းရည်များကို မြှင့်တင်ရင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါမည်။ ၎င်းတွင် အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရာများအတွက် ကတ်များပါရှိပြီး အသံထွက်ရှိသော မှော်ခဲတံကြောင့် ကလေးက အဖြေမှန်သလား စစ်ဆေးနိုင်စေရန်အတွက် မိမိကိုယ်ကို ပြုပြင်သည့်စနစ်ပါရှိသည်။
BEAN Adela ပျား
မာယာပျားသည် တစ်ခုတည်းသော ကျော်ကြားသည်မဟုတ်။ ယခု အသက်2နှစ်မှ ကလေးများအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဘုတ်ဂိမ်းကို ရောက်ရှိလာပါပြီ။ Adela သည် ပျားလေးများ၏ အရောင်အသွေးအတွက် အာရုံစူးစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်စေမည့် ပန်းပွင့်များမှ ဝတ်ရည်များကို စုဆောင်းကာ အုံထဲသို့ သယ်ဆောင်ကာ ပျားရည်ပြုလုပ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆွဲဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပျားရည်အိုးပြည့်တဲ့အခါ မင်းအနိုင်ရတယ်။ စည်းလုံးမှု၊ နားလည်မှုနှင့် သင်ယူမှုအရောင်များ၏ ခံစားချက်ကို အားဖြည့်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခု။
Adela the Bee ကိုဝယ်ပါ။
HABA Games: ပထမ...
2 နှစ်မှကလေးများအတွက်ဂိမ်း။ El Frutal ကဲ့သို့ ဂန္ထဝင်တစ်ဦး၏ ပြန်လည်ရယူမှုသည် သေးငယ်သောကလေးများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး စည်းမျဉ်းများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ကာ ဖော်မတ်ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပါသည်။ ကောင်းမွန်သော မော်တာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အသီးအနှံကို မစားသင့်သော ကျီးကန်းကို အနိုင်ယူရမည်ဖြစ်သောကြောင့်၊
Falomir Spike ပင်လယ်ဓားပြ
ဤသည်မှာ3နှစ်မှ ကလေးများအတွက် ရယ်စရာအကောင်းဆုံးဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ဓားပြကို မိတ်ဆက်ပေးမည့်နေရာတွင် စည်တစ်ခုထားရှိရမည့် အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုရှိပြီး သူခုန်ချမည့်အချိန်ကို မသိနိုင်ပေ။ ၎င်းတွင် ဓားရှည်များကို စည်ထဲသို့ အလှည့်ကျမောင်းနှင်ကာ ပင်လယ်ဓားပြခုန်ချရန် ပထမဆုံးသူက အနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
Pirate Pin ကိုဝယ်ပါ။
အရွယ်မရောက်သေးသူများ အသက်ကြီးလာပါက၊ ငယ်ရွယ်သောအရွယ်များအတွက် ဂိမ်းများသည် ကလေးဆန်ပြီး ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည်။ ၎င်းတို့သည် ဗျူဟာမြောက်တွေးခေါ်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ မှတ်ဉာဏ်စသည်တို့ကဲ့သို့သော အခြားစွမ်းရည်များကို မြှင့်တင်ရန် အာရုံစိုက်သည့် သီးခြားဂိမ်းများ လိုအပ်သည်။ အဲဒါတွေ အသက် ၅ နှစ်ဝန်းကျင် အရွယ်မရောက်သေးသူများစျေးကွက်တွင် ကလေးများအတွက် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ဘုတ်ဂိမ်းများကို သင်ရှာတွေ့နိုင်သည်-
ကစားတဲ့ ဘီးကို လှည့်ပြီး ဘုတ်ပြားကို ကျော်တက်ရတဲ့ အသက်5နှစ်အရွယ် ကလေးတွေအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဂိမ်းတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် အဖေက အိပ်ယာပေါ်မှာ အိပ်ပျော်နေပြီး ဆူညံနေရင် သူ့ကို နှိုးပြီး အိပ်ရာထဲ ပို့ပေးမှာ ဖြစ်လို့ တိတ်တဆိတ် လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
မနှိုးနဲ့ ဖေဖေ ဝယ်ပါ
၎င်းသည် အသက်4နှစ်မှ ကလေးများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော board game ဖြစ်သည်။ ခရီးဆောင်အိတ် အားလုံးကို ကန်ပစ် ပစ်လိုက်တဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် မြည်းတစ်ကောင်က ကန်လိုက်တဲ့အခါ ကံကောင်းခြင်းတွေ ကုန်သွားသလို သူ့အပေါ် တင်ထားသမျှ အရာအားလုံး လေထဲကို ခုန်ဆင်းသွား တယ်။ ဤဂိမ်းတွင် အခက်အခဲ3အဆင့် ရှိသည်- စတင်သူ၊ အလယ်အလတ်နှင့် အဆင့်မြင့်။ ၎င်းတွင် အရာဝတ္ထုများကို မြည်းကုန်းနှီးပေါ်တွင် အလှည့်အပြောင်းများ ထားရှိခြင်း ပါဝင်သည်။
Hasbro Gaming - ဂိမ်း...
ဤရေပိုက်သမားသည် ကြီးမားသောလူမိုက်၊ ကြမ်းပြင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သူရုန်းကန်နေရပါသည်။ ကလေးများသည် ကိရိယာများကို ခါးပတ်ပေါ်တွင် အလှည့်ကျချထားရမည်ဖြစ်ပြီး ကိရိယာတစ်ခုစီသည် ဘောင်းဘီကို အနည်းငယ်ပိုကျစေမည်ဖြစ်သည်။ ဘောင်းဘီ လုံးဝကျွတ်ရင် ရေတွေ စိုလာမယ်။ မစိုသော သူသည် သူတစ်ပါးကို အနိုင်ယူလိမ့်မည်။
Sloppy Plumber ကိုဝယ်ပါ။
Goliath - Anton Zampon၊...
Antón Zampón အမည်ရှိ ဤချစ်စရာကောင်းသောဝက်ကလေးသည် ကလေးငယ်များ၏စွမ်းရည်ကို စမ်းသပ်မည်ဖြစ်သည်။ သူ့ဘောင်းဘီ မပေါက်ကွဲမချင်း ဇာတ်ကောင်ကို အစာကျွေးမယ့် ရိုးရှင်းတဲ့ဂိမ်းတစ်ခု။ ၎င်းတို့သည် ဟမ်ဘာဂါမည်မျှစားနိုင်သည်ကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီး ကစားသမား ၁ ဦးမှ ၆ ဦးအထိ အလှည့်ကျကစားနိုင်သည်...
Antón Zampon ကိုဝယ်ပါ။
ဤသည်မှာ အပျော်ဆုံး ငါးမျှားခြင်းကို လေ့ကျင့်နိုင်သည့် ကလေးများအတွက် အခြားဘုတ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ tuburon သည် ဗိုက်ဆာနေပြီး ငါးမျှားတံကို ပါးစပ်မှ ဆွဲထုတ်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ရမည့် ငါးများစွာကို မျိုချလိုက်ပါသည်။ သို့သော် အချိန်မရွေး ငါးမန်းကိုက်ခံရမည်ဖြစ်သောကြောင့် သတိထားပါ။ မင်းကယ်တင်နိုင်တဲ့ နောက်ထပ်အကောင်က ဘယ်သူနိုင်မလဲ။
ဤပါတီသည် အသက်4နှစ်မှ ကလေးများအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး Disney အပြင်အဆင်ဖြင့် ရောက်ရှိလာပါပြီ။ သင်ယူပြီး ပျော်ရွှင်စရာ အစုံအလင်ရှိသော ဘုတ်ဂိမ်း။ ၎င်းကို စိတ်ကူးယဉ်စက်ရုံမှ ဇာတ်ကောင်များ၏ ကိန်းဂဏန်းများကို ရယူရန်အတွက် စမ်းသပ်မှုပေါင်းများစွာကို အောင်မြင်စွာဖြေဆိုနိုင်ရန် မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ စာမေးပွဲများသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် ပါတီနှင့် ဆင်တူသည်၊ အတုခိုးခြင်း၊ ပုံဆွဲခြင်း စသည်ဖြင့် စမ်းသပ်မှုများ၊
Hasbro ဂိမ်း- ဘောလုံးအပေါက်...
ဂန္ထဝင်ပုံစံမဟုတ်သော။ ခရစ္စမတ် နီးကပ်လာချိန် သို့မဟုတ် အရုပ်ရောင်းရငွေ တိုးလာသည့်အခါ ရာနှင့်ချီသော ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာများ။ ကစားသူလေးဦးမှ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ဟစ်ပိုများ ဖြစ်နိုင်သည့် ဘောလုံးအားလုံးကို မျိုချရမည့် ကလေးများအတွက် ဘုတ်ဂိမ်း။ ဘောလုံးအများဆုံးရရှိသူသည်အနိုင်ရလိမ့်မည်။
Ball Slot ကိုဝယ်ပါ။
Hasbro Crocodile သွားကြားထိုးတံ
ဤမိကျောင်းသည် စားကြူးသော်လည်း အလွန်စားသောကြောင့် သွားများမကောင်းသဖြင့် သွားစစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤဖော်ရွေသောမိကျောင်းကို နာကျင်စေမည့် သွားများကို သင်တွေ့ပြီဖြစ်သောကြောင့် ပါးစပ်မပိတ်မီ အံကို တတ်နိုင်သမျှ များများထုတ်ပါ။ ကလေးများ၏ လက်စွမ်းနှင့် သွက်လက်တက်ကြွမှုကို အားပေးသည့် ရိုးရှင်းသောဂိမ်း။
Sucker Crocodile ဝယ်ပါ။
Junior Grabolo ဆော့တယ်..။
အိမ်ရှိကလေးငယ်များအတွက် ပျော်စရာ ပညာရေးဘုတ်ဂိမ်း။ ၎င်းသည် အလွန်သွက်လက်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု၊ စူးစမ်းမှု၊ ယုတ္တိဗေဒနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုတို့ကို ဖွံ့ဖြိုးစေသည်။ နားလည်ရလွယ်ကူသည်၊ သင်သည် အန်စာတုံးများကို လိပ်လိုက်ရုံဖြင့် ကတ်များကြားမှ ထွက်လာသည့် ပေါင်းစပ်မှုကို ရှာဖွေရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လျင်မြန်သော ဂိမ်းများကို ပြုလုပ်နိုင်စေပြီး ခရီးများထွက်ရန် ပြီးပြည့်စုံစေနိုင်သည်။
Grabolo Jr ကိုဝယ်ပါ။
Falomir - ငါကဘာလဲ...
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်း ကစားရန် အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်နိုင်သော ပျော်စရာဘုတ်ဂိမ်း။ ၎င်းသည် သင်မှလွဲ၍ လူတိုင်းမြင်ရသော ကတ်တစ်ခုကို ထားရမည့်နေရာတွင် ခေါင်းထောက်ခြင်းဖြင့် ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဝေါဟာရကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် ကူညီပေးပြီး ကတ်ပေါ်တွင် ပေါ်လာသည့်ဇာတ်ကောင်သည် မည်သူဖြစ်သည်ကို ခန့်မှန်းရန် သင်မေးခွန်းများမေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဤဂိမ်းသည် မော်တာကျွမ်းကျင်မှု၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနှင့် အာရုံခံစားမှုများ တိုးတက်စေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အသက်6နှစ်မှ 12 နှစ်ကြား ကလေးများအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းများ
အသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်6မှ 12 နှစ်အကြားဤအသက်အပိုင်းအခြား၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် ထူးထူးခြားခြား ဘုတ်ဂိမ်းများလည်း ရှိပါသည်။ ဤဆောင်းပါးအမျိုးအစားများသည် အများအားဖြင့် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောစိန်ခေါ်မှုများ ရှိကြပြီး မှတ်ဉာဏ်၊ နည်းပရိယာယ်၊ ယုတ္တိဗေဒ၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ တိမ်းညွှတ်မှုစသည့် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးတို့ကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ အကောင်းဆုံးများထဲတွင်-
Hasbro မိုနိုပိုလီ Fortnite
မိုနိုပိုလီ Fortnite (Hasbro ...
Classic Monopoly သည် အောင်မြင်မှုနှင့် အမြဲတစေ အဓိပ္ပါယ်တူပြီး ၎င်းသည် မည်သည့်အခါမှ ပုံစံမကျပါ။ ယခုအခါ Fortnite ဗီဒီယိုဂိမ်းကို အခြေခံ၍ အလုံးစုံ အသစ်ပြုပြင်ထားသော ဗားရှင်းတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းသည် ကစားသမားများရရှိသည့် ကြွယ်ဝမှုပမာဏအပေါ်တွင် အခြေမခံဘဲ မြေပုံ သို့မဟုတ် ဘုတ်ပေါ်တွင် ရှင်သန်နိုင်စေရန် စီမံသည့်အချိန်ပမာဏကို အခြေခံထားသည်။
ဟုတ်တယ်၊ လူကြိုက်များတဲ့ ဖန်တီးမှုနဲ့ ရှင်သန်ခြင်း ဗီဒီယိုဂိမ်း Minecraft ဟာလည်း ဘုတ်ဂိမ်းလောကထဲကို ရောက်နေပါပြီ။ ကစားသမားတစ်ဦးစီတွင် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး အရင်းအမြစ်ပိတ်ဆို့ခြင်းများစွာကို စုဆောင်းပါ။ စိတ်ကူးသည် ကမ္ဘာတစ်ခုစီမှ သတ္တဝါများကို တိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ အနိုင်ရရှိသူသည် ၎င်းတို့၏ ချစ်ပ်များဖြင့် ဘုတ်အဖွဲ့ကို ပထမဆုံး အပြီးသတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အသေးအဖွဲလိုက်ရှာ Dragon Ball
Dragon Ball anime universe ဖြင့် နာမည်ကြီး Trivial Pursuit အသေးအဖွဲဂိမ်း၏ ရယ်မောမှုကို သင် စိတ်ကူးကြည့်နိုင်ပါသလား။ ကဲ အခုဆို မင်းမှာ အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်တွေအကြောင်း မင်းသိထားတဲ့ ဗဟုသုတတွေကို သရုပ်ပြနိုင်ဖို့ စုစုပေါင်း 600 မေးခွန်းတွေ နဲ့ ဒီဂိမ်းထဲမှာ အားလုံးရှိပြီးသားပါ။
Cluedo အသက်- 8 နှစ်မှ...
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော လူသတ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သံသယရှိသူ6ဦးရှိပြီး လူသတ်မှုကျူးလွန်သူထံ ပို့ဆောင်ပေးမည့် သဲလွန်စများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် မှုခင်းအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကို ဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်သည်။ စုံစမ်း၊ ဖုံးကွယ်၊ စွပ်စွဲပြီး အနိုင်ရ။ စျေးကွက်ရှိ အကောင်းဆုံး တွေးခေါ်မှုနှင့် စိတ်ကူးယဉ်ဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခု။
သင် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်များကို နှစ်သက်ပါက၊ ဤသည်မှာ သင့်ဘုတ်ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ပျောက်ဆုံးသွားသော အရာဝတ္ထုအချို့ကို ရှာဖွေရန် သင်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ဝင်္ကပါကို ကျော်ဖြတ်ရမည့် ရိုးရှင်းသောဂိမ်းတစ်ခု။ အရာဝတ္ထုများနှင့် ထွက်သွားရန် ကြိုးစားပြီး ဝင်္ကပါ၏ စင်္ကြံများကို ဖြတ်ကျော်ရန် သတ္တိရှိရှိ သင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည် ။
Magic Labyrinth ကိုဝယ်ပါ။
Atom Games သည် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ဇာတ်ကောင်များနှင့် အရာဝတ္ထုများပါရှိသော ကတ် 62 ခုပါသည့် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ပျော်စရာဘုတ်ဂိမ်းကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့နှင့်အတူ အိမ်ရှိကလေးငယ်များ၏ စွမ်းရည်များ တိုးတက်စေခြင်း (စုံစမ်းရေးမှူး၊ အမြန်နှုန်းမုဒ်နှင့် အခြားမှတ်ဉာဏ်များကဲ့သို့) နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ကစားနိုင်သည်။
The Castle of Terror ကိုဝယ်ပါ။
Diset - ဂိမ်းပါတီနှင့် တွဲဖက်...
ကလေးများအတွက် နာမည်ကြီး Party & Co board game ၏ နောက်ထပ်ဗားရှင်း။ သင်သည် အသင်းများကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး မတူညီသော စာမေးပွဲများကို အောင်မြင်စွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖိုင်နယ်ကိုရောက်ဖို့ ပထမဆုံးသူက အနိုင်ရလိမ့်မယ်။ ဒါကိုလုပ်ဖို့၊ သင်က ပုံဆွဲစမ်းသပ်မှုတွေ၊ ဂီတ၊ အမူအရာ၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ မေးခွန်းတွေ စတာတွေကို ကျော်ဖြတ်ရပါမယ်။
Hasbro Gaming ဂိမ်း...
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပျံ့နှံ့သွားပြီး ကစားသမားများ၏ လက်စွမ်းနှင့် ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာ အသိပညာကို စမ်းသပ်သည့် ဂန္တဝင်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူနာတစ်ဦးသည် နေမကောင်းဖြစ်ပြီး မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများကို ဖယ်ရှားကာ ခွဲစိတ်ကုသရန် လိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့် သတိထားရမှာက ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ရဲ့ သွေးခုန်နှုန်းကို လိုအပ်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အပိုင်းအစတွေက မင်းရဲ့နှာခေါင်းနံရံကို ထိရင် လင်းလာပြီး မင်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်… ပြီးတော့ မင်း minions ကြိုက်တယ်ဆိုရင် အဲဒီဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ ဗားရှင်းတစ်ခုလည်း ရှိတယ်။
Hasbro ဘယ်သူလဲ ?
Hasbro Gaming ဘယ်သူလဲ၊
နောက်တစ်ခုကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေပါ။ အစီအရီဇာတ်ကောင်များပါရှိသော လူတစ်ဦးလျှင် ဘုတ်တစ်ခု။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရန်သူ၏ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော ဇာတ်ကောင်ကို မေးခွန်းများမေးပြီး သူပေးနေသော သဲလွန်စများနှင့် မကိုက်ညီသော ဇာတ်ကောင်များကို ဖယ်ပစ်ခြင်းဖြင့် ရန်သူ၏ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော ဇာတ်ကောင်ကို ခန့်မှန်းရန်ဖြစ်သည်။
ပျော်စရာကောင်းရုံသာမက ကလေးများအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းအချို့လည်း ရှိပါသည်။ သူတို့က ပညာပေးတွေဆိုတော့ ကစားခြင်းဖြင့် သင်ယူကြမယ်။. သူတို့အတွက် ငြီးငွေ့စရာ သို့မဟုတ် ပျင်းစရာကောင်းသော အလုပ်မပါဝင်ဘဲ ကျောင်းတွင်းသင်ကြားမှုကို အားဖြည့်ပေးသည့် နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ယေဘူယျ ယဉ်ကျေးမှု၊ သင်္ချာ၊ ဘာသာစကား၊ ဘာသာစကား အစရှိသည့် အကြောင်းအရာများပါရှိသည်။ ဤအမျိုးအစားတွင် အကောင်းဆုံးမှာ-
spatial ရူပါရုံ၊ ပြဿနာဖြေရှင်းမှု၊ မတူညီသောအဆင့်စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုရှိသော ယုတ္တိဗေဒအမြင်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ပျော်ရွှင်စရာ ပညာရေးဆိုင်ရာ ပဟေဠိဂိမ်းတစ်ခု။ ဂိမ်းကစားခြင်းဖြင့် သိမြင်နိုင်စွမ်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကို မြှင့်တင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခု။
The House of Ghosts ကိုဝယ်ပါ။
Temple Trap - စမတ်...
ဤပညာပေးဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းသည် ယုတ္တိဗေဒ၊ လိုက်လျောညီထွေရှိသောတွေးခေါ်မှု၊ အမြင်အာရုံခံစားမှုနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ မတူညီသောစိန်ခေါ်မှု 60 နှင့်အတူ သင့်တွင်ရွေးချယ်ရန်အခက်အခဲအဆင့်များစွာရှိသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်သည် ကစားရန်သော့ချက်ဖြစ်သည့် ပဟေဠိတစ်ခုဖြစ်သည်။
Temple Trap ကိုဝယ်ပါ။
ကစားသမားများသည် စိတ်ခံစားမှု သို့မဟုတ် ခံစားချက်များကို ကိုယ်စားပြုသည့် အရောင်များမှတစ်ဆင့် ရွေ့လျားကာ ကစားသူများသည် အသက်3နှစ်မှ6နှစ်ကြား ကလေးများအတွက် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ သင်ယူမှုပုံစံဖြစ်စေသည့် အံ့အားသင့်စရာ ပညာရေးဘုတ်ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ကျောင်းများတွင် မကြာခဏ မေ့ပျောက်လေ့ရှိသော အရာတစ်ခုသည် ၎င်းတို့၏ စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် အခြားသူများနှင့် ဆက်ဆံရေးအတွက် အရေးကြီးသော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အသက်4နှစ်အထက်ကလေးများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်နှင့် စပိန်ဘာသာစကားစွမ်းရည်များ တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်၊ ၎င်းတို့ကို မှန်ကန်စွာ တိုက်ဆိုင်ရန်အတွက် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်စပ်နေရမည့် ပုံများနှင့် စကားလုံးများပါရှိသော ကတ်များကို အသုံးပြုပါ။
Safari ဂိမ်း၏ ...
မိသားစုတစ်စုလုံးပါဝင်နိုင်သည့်ဂိမ်းဖြစ်ပြီး တိရစ္ဆာန်များနှင့် ပထဝီဝင်ကို ကလေးများလေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန် 72 မျိုးအထိနှင့် ညွှန်ကြားချက်များ (စပိန်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ အီတလီ၊ ဒတ်ခ်ျနှင့် ပေါ်တူဂီ)။
ကလေးများနှင့် လူကြီးများအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းများ
ကလေးကစားနိုင်သော ကလေးများအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းများကိုလည်း သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်အတူ လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။အမေ၊ ဖေဖေ၊ အဘိုးအဘွားတွေ၊ ညီအကိုမောင်နှမတွေပဲ ဖြစ်ပါစေ။ အိမ်၏အသေးဆုံးကို ဂရုစိုက်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ဂိမ်းများတွင်ပါဝင်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခု၊ ၎င်းတို့အတွက်သာမက လူကြီးများအတွက်ပါ အရေးကြီးသည့်အရာဖြစ်သောကြောင့် သင်သည် အချိန်ပိုပေးပြီး ၎င်းတို့ကို အနည်းငယ်ပိုကောင်းအောင် သိနိုင်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ ဂိမ်းတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေကို မေ့သွားမှာ သေချာပါတယ်။
အပိုင်း ၅၀၀ ၏ ပဟေဋ္ဌိ...
Super Mario Odyssey World Traveler ၏ကမ္ဘာမှ ပုံဖော်ထားသော ပဟေဋ္ဌိ 500 ခု။ အသက် 10 နှစ်မှ ကလေးများအတွက် သင့်လျော်သော မိသားစုအဖြစ် တည်ဆောက်ရန် နည်းလမ်း။ တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်၎င်းသည်အတိုင်းအတာ 19 × 28.5 × 3.5 စင်တီမီတာရှိသည်။
နေအဖွဲ့အစည်း၏ 3D ပဟေဋ္ဌိ
Ravensburger - ပဟေဠိ 3D၊ ...
နက္ခတ္တဗေဒပညာကို ကစားပြီး လေ့လာရန် အခြားနည်းလမ်းမှာ ဂြိုဟ်စနစ်၏ 3D ပဟေဋ္ဌိကို တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် စကြာဝဋ္ဌာ၏ ဂြိုလ် ၈ လုံးနှင့် နေအပြင် ဂြိုလ်ကွင်း ၂ လုံး ပါ၀င်ပြီး စုစုပေါင်း အပိုင်းအစ ၅၂၂ ခု ပါရှိသည်။ ပဟေဋ္ဌိပြီးသွားသည်နှင့်၊ ၎င်းကိုအလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အသင့်တော်ဆုံးအသက်ကတော့ 8 နှစ်မှဖြစ်ပါတယ်။
3D ပဟေဠိများကို ဝယ်ပါ။
ColorBaby - စားပွဲ...
စားပွဲတစ်ခုတည်းတွင် မတူညီသောဂိမ်း 12 ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်အမြင့် 69 စင်တီမီတာရှိပြီးဘုတ်အဖွဲ့၏မျက်နှာပြင်သည် 104 × 57.5 စင်တီမီတာရှိသည်။ ရေကူးကန်၊ စားပွဲတင်ဘောလုံး၊ ဟော်ကီ၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်၊ စစ်တုရင်၊ checkers၊ backgammon၊ ဘိုးလင်း၊ ရှပ်ဘုတ်၊ ဖဲချပ်၊ မြင်းခွာရွက်နှင့် အန်စာတုံးများကို ကစားရန်အတွက် အပိုင်းပိုင်း 150 ကျော်နှင့် လဲလှယ်နိုင်သော ဂိမ်းအစုံပါရှိသည်။6နှစ်မှကလေးများနှင့်မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်စံပြ။ မော်တာကျွမ်းကျင်မှု၊ လက်စွဲကျွမ်းကျင်မှု၊ ယုတ္တိတွေးခေါ်မှုနှင့် သင်ယူမှုတို့ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကူညီပေးသည့်နည်းလမ်း။
Mattel Scrabble မူရင်း
အသက် 10 နှစ်မှစ၍ ဤဂိမ်းသည် မိသားစုနှင့် အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက် အပျော်ဆုံးနှင့် ဖျော်ဖြေမှုအရှိဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကစားသမားတစ်ဦးစီယူသော ကျပန်းအကွက်7ခုဖြင့် အမြင့်ဆုံး crossword ရမှတ်ကိုရရန် ပျော်ရွှင်စရာစာလုံးပေါင်းများပါရှိသည့် ဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝေါဟာရတိုးတက်စေခြင်းအပြင် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Mattel Games- အဘိဓာန်...
၎င်းသည် သင့်ပုံများနှင့်အတူ သင်ဖော်ပြလိုသည်များကို ခန့်မှန်းနိုင်ရန် ၎င်းတို့အား ကြိုးစားရမည်ဖြစ်ပြီး ဂန္ထဝင်ပုံဆွဲဂိမ်း၏ ဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူသိအများဆုံးဂိမ်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အုပ်စုလိုက်ကစားသင့်ပြီး အထူးသဖြင့် Picasian ပုံဆွဲကျွမ်းကျင်သော အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အလွန်ပျော်စရာကောင်းသော အခြေအနေများသို့ ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အဲဒါကို ရိုက်ပါ။ - အဲ...
၎င်းသည် သင့်အား လှုပ်ရှားစေပြီး အရူးစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးကို လုပ်ဆောင်စေမည့် အဆိုပါ board games များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ထိုးနှက်ရန်၊ ချိန်ခွင်လျှာ၊ ကယောင်ကတမ်း၊ ခုန်၊ မီးပုံစသည်ဖြင့် ရယ်စရာကောင်းသောစမ်းသပ်မှု 160 ဖြင့် ကျော်ဖြတ်ရန် စိန်ခေါ်မှုများ။ ရယ်မောခြင်းက အာမခံချက်ထက်ပိုပါတယ်။
က​လေး​လေး​တွေချစ်​​ပေမယ့်​ တစ်​မိသားစုလုံးအတွက်​ လိုက်​ဖက်​တဲ့ ဂိမ်း​လေးပါ။ စွန့်စားလိုသူများ၏ စိတ်ဝိဉာဉ်ရှိပြီး ဥရောပ၏အဓိကမြို့ကြီးများကို ဖြတ်ကျော်ကာ အမြန်ရထားလမ်းခရီးကို သင်စမ်းသပ်စေမည့် မြေပုံကြီးတစ်ခုပေါ်ရှိသူများအတွက်။ ကစားသမားတစ်ဦးစီသည် လမ်းကြောင်းသစ်များတည်ဆောက်ရန်နှင့် ရထားကွန်ရက်ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် လှည်းဝန်များကို စုဆောင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဦးတည်ရာအတွက် လက်မှတ်များကို ပြီးမြောက်သူသည် ဂိမ်းကို အနိုင်ရသည်။
ပထမဆုံး ခရီးကို သွားဝယ်ပါ။
သင်ရယ်မောစေသော ဂိမ်းများကို နှစ်သက်ပါက ၎င်းသည် အခြားဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ မတူညီသောကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်3ဖြင့် မိသားစုအားလုံးနှင့် သူငယ်ချင်းများနှင့် ကစားပါ။ ၎င်းတို့ကို သင့်အား နားလည်စေရန်နှင့် ကတ်ပေါင်း 320 ပါသော ကျယ်ပြန့်သော repertoire ဖြင့် ၎င်းတို့ကို လျင်မြန်သော အတုခိုးမှုပြုလုပ်ရန် ၎င်းတွင် သင်သည် လျင်မြန်စွာ အတုခိုးခံရမည်ဖြစ်သည်။
ဤဘုတ်ဂိမ်းသည် စူးစမ်းရှာဖွေမှုအလယ်တွင် သင့်ကို နှစ်ဆယ်ရာစုဆီသို့ ပြန်ခေါ်ဆောင်သွားစေသည်။ သမုဒ္ဒရာအလယ်တွင် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောကျွန်းတစ်ကျွန်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး ရတနာတစ်ခုဝှက်ထားသည်ဟု ဒဏ္ဍာရီကပြောသည့် စွန့်စားခန်းဂိမ်းတစ်ခု။ ဒါပေမယ့် စွန့်စားသူတွေဟာ မတူညီတဲ့ အတားအဆီးတွေ၊ ပင်လယ်ဘီလူးတွေနဲ့... ကျွန်းကို တဖြည်းဖြည်းနစ်မြုပ်သွားစေမယ့် ပေါက်ကွဲနေတဲ့ မီးတောင်တွေနဲ့ ... ကြုံရပါလိမ့်မယ်။
Carcata - ဘုတ်ဂိမ်းနှင့် ...
Carcata သည် စွန့်စားမှုနှင့် ဗျူဟာကို ရောနှောထားသည်။ အဲဒီအထဲမှာ မင်းရဲ့မျိုးနွယ်စုကို မီးတောင်ရှိတဲ့ ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်မှာ ဆင်းသက်ပြီး ဒီနေရာဟာ ခိုအောင်းနေတဲ့ အန္တရာယ်တွေကို လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ အပြင်းထန်ဆုံး မျိုးနွယ်ဖြစ်ကြောင်း ပြသရပါလိမ့်မယ်။ သင်၏နယ်မြေများကိုကာကွယ်ပါ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်မျိုးနွယ်စုများ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်ပါ၊ ရှေ့တိုးပါ၊ ကျောက်မျက်ရတနာစုဆောင်းပါ၊ ကျွန်းကိုကာကွယ်သည့်ဝိညာဉ်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပါ။
https://torange.biz/childrens-board-game-sea-battle-48363 မှ အခမဲ့ရုပ်ပုံ (ကလေးများကစားနည်း Sea Battle)
စျေးကွက်တွင် စတင်ရောင်းချသည့် အမျိုးအစားများနှင့် ခေါင်းစဉ်များ ပိုများလာသောကြောင့် board game တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် အချို့သောအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သောကြောင့် ကလေးများအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းရွေးချယ်ခြင်းသည် ပို၍ပင်ရှုပ်ထွေးပါသည်။ အသေးအမွှားလုံခြုံရေးအတွက်:
ကလေးများအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းများကို ညွှန်ပြလေ့ရှိသည်။ အနည်းဆုံးနှင့် အများဆုံးအသက် သူတို့အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အခြေခံစံသုံးချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ထိုအသက်အုပ်စုအတွက် တရားဝင်စေသော လက်မှတ်တစ်ခု။
လုံခွုံရေးဥပမာအားဖြင့်၊ ငယ်ရွယ်သောကလေးများသည် အန်စာတုံးများ၊ တိုကင်များ စသည်တို့ကို မျိုချနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ထိုအရွယ်အတွက် ဂိမ်းများတွင် ဤအပိုင်းအစများ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ထုတ်ကုန်သည် အီးယူဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများကို ကျော်ဖြတ်ကြောင်းသိရန် CE လက်မှတ်ရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲ အာရှမှရောက်လာသော အတုများနှင့် အခြားအရုပ်များကို သတိပြုပါ...
ကျွမ်းကျင်မှုဂိမ်းအားလုံးသည် မည်သည့်အသက်အရွယ်အတွက်မဆို ဖြစ်နိုင်သည်၊ အချို့မှာ ကလေးများအတွက် မပြင်ဆင်နိုင်ဘဲ၊ ၎င်းတို့သည် ခက်ခဲနိုင်သည် သို့မဟုတ် မဖြစ်နိုင်ဘဲ၊ စိတ်ပျက်အားငယ်ကာ ဂိမ်းကို ဖြတ်လိုက်ခြင်းပင်။
အကြောင်းအရာ: အချို့အကြောင်းအရာများသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပြီး အရွယ်မရောက်သေးသူများအတွက် မသင့်လျော်သော အပြင်အဆင်များ ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာ အကြောင်းအရာသည် လည်း အရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာ အချို့သော အကြောင်းအရာများသည် ၎င်းကို နားမလည်သောကြောင့် မကြိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤအင်္ဂါရပ်သည် မစိုးရိမ်ရသော်လည်း၊ ဟုတ်တယ် အရေးကြီးတယ်။. ဂိမ်း၏လက်ခံသူ၏ အရသာနှင့် နှစ်သက်မှုများကို သိရန်မှာ အပြုသဘောဆောင်သည်၊ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့သည် သီးခြားအကြောင်းအရာ (သိပ္ပံ၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်၊ ...) သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင် သို့မဟုတ် ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲ (Toy Story) ၏ ပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့်၊ ၊ Hello Kitty၊ Dragon Ball၊ Rugrats၊…) ဂိမ်းများသည် သင့်အား ကစားရန် အများဆုံး လှုံ့ဆော်ပေးမည့် ဂိမ်းများဖြစ်သည်။
ဤအင်္ဂါရပ်သည် စျေးနှုန်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်သာမက ဂိမ်း၏လုံခြုံရေးနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည် (မကြေမနပ်ဖြစ်စေနိုင်သော သေးငယ်သောအပိုင်းအစများ၊ ဒဏ်ရာဖြစ်စေသော ချွန်ထက်သောအပိုင်းအစများအဖြစ်သို့ မဟုတ်ဘဲ ...) နှင့် ကြာရှည်ခံမှု. အချို့ဂိမ်းများသည် လျင်မြန်စွာ ပျက်သွားခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးမပြုတော့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် သိမ်းဆည်းရန် အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတာက ဝင်လာတဲ့ဂိမ်းကို ရှာဖို့ပါပဲ။ သေတ္တာသို့မဟုတ်အိတ် အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို သင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည့်နေရာတွင် ဒါကို သတိထားရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့-
ဒါမှ အသေးအမွှားလေးက တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို အလွယ်တကူ ယူဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဂိမ်းပြီးဆုံးသည့်အခါ မှာယူရန် သူ့ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး မှာယူပါ။
အဲဒါကို အလွယ်တကူ သိမ်းဆည်းလို့ရတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အားလပ်ခွင့်ပေးပါ » ယေဘုယျ » ကလေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း